ပေါငျရိုး | ပေါငျရိုး, ကျိုးပဲ့ခြင်း | ပေါငျရိုးလည်ပင်းကျိုး | ပေါငျရိုး Shaft ၏ကျိုး
mujeer မတ်လ 8, 20170မှတ်ချက်များ
2 ပေါငျရိုး, ကျိုးပဲ့ခြင်း
4 ပေါငျရိုး Shaft ၏ကျိုး
RELATED POST: အမြိုးသမီး | Feminization | Femoral Artery
ပေါငျရိုး Shaft ၏ကျိုး
ဆက်ဖတ်ရန်:5အလုပ်များအသက်တာ၌ကျန်းမာရေးဖြစ်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းများ
တစ်ဦးကရောင်ခြင်းဖြစ်စဉ်အတွက်ဆေးတွေ Anti-inflammatory မူးယစ် (NSAID) that is used to relieve pain and stiffness caused, ဥပမာ, by rheumatoid arthritis, osteoarthritis, and gout. Fenbufen is also used to reduce pain and to help speed recovery following muscle and ligament sprains.
ကျန်းမာရေး	femoral neck fracture in elderly, femoral neck fracture pathophysiology, femoral neck fracture picture, femoral neck fracture symptoms, femur neck fracture recovery time, fracture neck of femur ppt, neck of femur fracture orthobullets, right femoral neck fracture icd 10	bookmark
ယခင်အပိုဒ် အမြိုးသမီး | Feminization | Femoral Artery | Femoral Epiphysis, Slipped | အမြိုးသမီး
next ကိုပုဒ်မ Fertilization Get လုပ်နည်း | ပို့ခြင်း | မြေသြဇာကောင်းသောကာလ | သန္ဓေသားစောင်ရေ